प्रहरी, तरुण दल र गोविन्द केसीका समर्थकबीच बानेश्वरमा भीडन्त — Sanchar Kendra
प्रहरी, तरुण दल र गोविन्द केसीका समर्थकबीच बानेश्वरमा भीडन्त
काठमाडौं । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका समर्थक, प्रहरी र तरुण दलबीच नयाँबानेश्वरमा भिडन्त भएको छ । डा. गोविन्द केसीका समर्थकले नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलका कार्यकर्ताले जबर्जस्ती प्रवेश गरेपछि तनाव सुरु भएको हो।
प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्याँस प्रहार गरेपछि नेवि संघले पनि प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरेको थियो । झडपमा केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।
कुनै पनि दल वा संगठनको झण्डा नलिई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन आयोजकले आग्रह गरे पनि तरुण दल उक्त कार्यक्रममा आफ्नो झण्डासहित उपस्थित भएपछि झडप सुरु भएको थियो ।
माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म भएको र्‍यालीपछि कार्यक्रम जारी रहँदा एभरेस्ट होटलतर्फबाट तरुण दलका कार्यकर्ता सभास्थलमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए।
तर उनीहरूलाई रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा सभास्थलमा केहि समय दोहोरो हानहानको अवस्था समेत उत्पन्न भएको प्रत्यक्षदर्शीले संचारकेन्द्रलाई बताए । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले सम्बोधन गरिरहँदा अर्को तर्फबाट आएका तरुण दलका कार्यकर्तालाई प्रहरीले लखेटेको छ।